China JM23 JM26 Insulating FireBrick abakhiqizi nabaphakeli |Amandla
I-JM23 JM26 Insulating FireBrick
I-JM23 JM26 i-firebricks evikela umlilo igcwele ubumba obuhlanzekile, amabhola e-polylight nezinye izinto zokwakha isakhiwo se-pore esifanayo.Ngemuva kokubunjwa kwe-extrusion, baxoshwa ekushiseni okuphezulu.Indawo ngayinye yesitini ipholishwa ngomshini ukuze ibe nosayizi odingekayo.Lezi zitini zinesisindo esincane futhi zingasebenza esimweni sokushisa okuphezulu.
I-JM23 JM26 I-Insulating FireBricks ibeka i-alumina njengezinto eziyinhloko.Izitini ze-alumina ezingasindi kakhulu zisebenzisa izinto ezingaphili njengokulahlekelwa ekushiseni ukuze kwandiswe i-porosity yezinto eziphikisayo. ukhonkolo oqinisiwe ungasindisa kakhulu izindleko eziphelele zesakhiwo'sa izitini eziphikisayo ezidingekayo ukuze sizisebenzise ezinhlotsheni ezihlukahlukene zesithando somlilo ezifana nemboni yamakhemikhali、imboni yengilazi nokunye nokunye.Lezi Zizitini Zomlilo Ezivikelayo zenza kahle ekongeni amandla nasekugcineni ukushisa.Ukubekezelela izinga lokushisa kusuka ku-1300 kuya ku-1400 degrees.
I-JM23 JM26 I-Insulating FireBricks inomlingisi womphumela wokulondoloza ukushisa okuphezulu, ikhwalithi enhle yokuhlala isikhathi eside, ukuqina okuphezulu kwemishini , Ukufakwa okukhulu okonga amandla kanye namandla aphezulu okuchoboza abandayo.
I-JM23 JM26 engasindi izitini zokuvala ingasetshenziswa ngokuqondile kuma- refractory linings noma izendlalelo zokufakwa kwe-insulation, futhi zingasetshenziswa njengokungena esikhundleni sabakaki beziko lokushisa eliphezulu, izitini zokulungisa izimbawula kanye nezitini zokushisa ezingasindi.Ingasetshenziswa kabanzi ku-hot face refractory lining noma njenge-backup insulation material efana nokucubungula izinga lokushisa eliphezulu kwezinsimbi, amakhemikhali e-petrochemicals nezitsha zobumba.
Amandla Okuchotshozwa Okubandayo (MPa)
Ukuminyana kwenqwaba (g/cm3)
I-Porosity ebonakalayo (%)
1.Ukulawulwa kwekhwalithi yezinto ezingavuthiwe okubandakanya ukuhlolwa ngokomzimba namakhemikhali.
2.Ukuchotshozwa nokugaya inqwaba yezinto ezingavuthiwe.
3. Ngokusho kwekhasi ledatha yekhasimende elidingekayo ekuxubeni I-Raw Material.
Ukucindezela noma ukubumba isitini esiluhlaza kuncike ezintweni ezingavuthiwe ezahlukene kanye nokuma kwezitini.
4.Beka izitini kuhhavini lomhubhe ukuze ushise.
6.Umnyango wokulawula ikhwalithi uzohlola izitini ze-refractory eziqediwe ngokungahleliwe.
Ngasolwandle i-pallet yokhuni efuywe ngolwandle + ibhande lepulasitiki + ukugoqa kwefilimu yepulasitiki.
Okwedlule: Ipuleti lokufaka i-alumina elingenanhlamvu
Isitini sebhamuza se-Alumina